Srregio Apk Khuphela iV1.0 yasimahla kwi-Android [iyasebenza]
Srregio Apk Khuphela i-v1.0 yasimahla kwi-Android [iyasebenza]
Yonwabela amajelo eTV abukhoma, iimuvi, uthotho, iinkqubo, kunye nokunye okuninzi ISrregio Apk. Ungayikhuphela kwi-Androids kuphela kwaye nantsi ikhonkco lenguqulelo yamva nje yeapp.
Ngowona mthombo wokuzonwabisa ubonelela ngeentlobo ezininzi zeempawu. Ke, masizame ukonwabela ixesha lakho lokuzonwabisa ngendlela engcono kunokulichithela kwizinto ezingenamsebenzi.
Ngaba iSrregio Apk esemthethweni yokuKhuphela kunye nokuSebenzisa kwi-Android?
ISrregio sisixhobo esibonelela ngeqonga apho unokubukela iTv bukhoma kunye neemovie. Unokonwabela amawaka eengoma ezivela kwiimvumi ezahlukeneyo. Apho unokufumana umxholo kwiilwimi ezininzi kwiindidi ezahlukeneyo. Iyahambelana kuphela nezixhobo ze-Android.
Elona candelo lililo lokusebenza kukuba unokuba neendidi ezininzi onokuhamba kuzo. Ukufumana umxholo ngokokhetho lwakho, unokusebenzisa ngokulula ukhetho lokukhangela. Ungandwendwela iwebhusayithi esemthethweni ukonwabela iinkqubo ezikwidesktop yakho okanye kwiLaptop.
Nangona kunjalo, kungcono kwiifowuni ze-Android kunye neepilisi. Ngenxa yokuba uza kuba ujongano olulula nolusebenzisekayo kuhlobo lwe-Android. Ke, ke, ndingakucebisa ukuba uzame kwaye wonwabe kwimiboniso bhanyabhanya kwii-smartphones okanye iipilisi zakho.
Ukuba ufuna ukufumana amanqaku ngakumbi emva koko ungabhalisela ipremiyamu. Kwinguqulelo yeprimiyamu yeapp, uza kufumana izinto eziqhelekileyo ozibukela kwiNetflix okanye naziphi na ezinye ii -apps zeepremiyamu. Kodwa unokuba namakhulu ezinto kuhlelo lwasimahla.
Ke, ndicinga ukuba yasimahla ibhetele ukuba uyathandabuza ukuhlawula. Umgangatho wevidiyo ungcono kwaye ungasasaza zonke iinkqubo kwi-app. Nangona kunjalo, kukho ezinye iinkqubo ezifanayo endinokucebisa ngazo njenge BaGy kwaye 123eenkonzo Apk.
ubungakanani 9.29 MB
Igama lepakheji iregio.play01
Iyafuneka i-Android 4.1 kunye no-Up
Nazi izinto ezininzi ezintle onokuzisebenzisa okanye ukonwabele kwiSrregio App. Ke, ukuba unomdla wokwazi ukuba uza kuba yintoni na kwi-app, kuya kufuneka ufunde la manqaku alandelayo ngezantsi. Ezi zizinto eziphambili eziphambili.
Isimahla ukukhuphela kunye nokusebenzisa kwii-smartphones ze-Android.
Inikezela ngamakhulu amabhanyabhanya kunye nothotho.
Bukela amajelo kamabonakude aphilayo avela kumazwe ahlukeneyo.
Yonwabela iminyhadala yemidlalo.
Fumana uhlaziyo lweendaba zamva nje kubandakanya ezesizwe nezamazwe aphesheya.
Kukhuselekile ukukhuphela kunye nokusebenzisa.
Isibonisi esilula nesisebenziseka lula.
Yonwabela amawaka eengoma.
Iindidi ezahlukeneyo zeenkqubo zabantwana.
Hayi, ayiloqonga elisemthethweni. Kungenxa yokuba ngumthombo wesithathu wolonwabo. Ke ngoko, ayinayo ilayisensi yokwabelana ngomxholo owabelana nawo kwiqonga lawo.
Nangona kunjalo, inokuthathwa njengekhuselekileyo kubasebenzisi. Kuba baninzi kakhulu abasebenzisi abasebenzisa ezo ntlobo zeapps. Kodwa inokuvalwa okanye ivalwe nangaliphi na ixesha.
Ke, ngelo xesha, ungazama ezinye iindawo zokuzonwabisa. Ndabele abanye babo kanye kweli nqaku onokuzikhuphela kule webhusayithi inye.
Yonwabela ixesha lakho lokuzonwabisa kunye namakhulu bhanyabhanya, uthotho, amajelo aphilayo, njalo njalo. Khuphela uguqulelo lwamva nje lweSrregio Apk ngokusebenzisa ikhonkco elingezantsi.
exhonyiweyo apps, ukonwatyiswaephawulweyo ISrregio, ISrregio Apk, Khuphela uSrregio